Sheekadii kaftanka ee isu rogtay musiibo bini’aadannimo - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaSheekadii kaftanka ee isu rogtay musiibo bini’aadannimo
Labo magaalo yar yar oo ku taala gobolka Nevada ee dalka Marayka ayaa marka la’isku daro tirada dadka ku nool waxa ay kaliya dhanyihiin 173, balse kumanaan qof oo aan waligood tagin meelahan ayaa markii ugu horeysay tagaya.
Haddaba maxaa ku qaas ah magaalooyinkan oo dadka intan la’eg u tagayaan?
Labadan magaalo oo lagu kala magacaabo Rachel iyo Hiko ayaa u dhow saldhigga ciidanka cirka ugu weyn Maraykanka ee lagu magacaabo Area 51, halkaas oo la rumeysanyahay in dowladda Maraykanka ay ku hayso nooleyaal ka yimid meerayaal kale oo la socday suxuunta duusha.
Waa arrin qiyaali loo arko, balse ku bilaabatay si kaftan ah, waxaana hadda jirta in labadaas magaalo lagu qabanayo labo xafladood oo waaweyn oo ay isugu imanayaan kumanaan qof oo haddaba isa sii diiwaangaliyay.
Ma jirto wax qabanqaabo ballaaran oo loo sameeyay xafladahan, si ka duwan xafladaha kale ee dadka intan dhan isugu imanayaan, sidaas darteed waxaa hadda laga cabsi qabaa in musiibo bini’aadanimo ay ka dhalato meesha haddii wax yar uun qaldamaan.
Ninka billaabay kaftankan ee shabakada Facebook afar bilood ka hor soo dhigay in nooleyaal meero kale ka yimi lagu soo bandhigayo xerada Area 51 oo magaciisu yahay Matty Roberts ayaa hadda sheegaya in uu welwel ka qabo in masiibo ay meesha ka dhacdo.
Ninkan ayaa Facebook kusoo bandhigay qorshe ah in haddii la helo dad tiro badan ay markaliya jiiri karaan askarta waardiga ah, kadibna gudaha la gali doono si ay usoo arkaan nooleyaasha qarsoodida ah ee la rumeysanyahay in meesha lagu hayo.
3.5 milyan oo qof ayaa iska diiwaangalisay bog uu ninkan ka furey Facebook, kuwaas oo sheegay in ay ka qeybgalayaan xafladda. Balse waxa uu Matty sheegay in markii hore ay kaftan ka ahayd.
Mid ka mid ah dadkaas ayaa BBC-da u sheegay in xitaa ay ka go’antahay in uu xoog ku gelo xerada ciidamada cirka oo uu rumeysanyahay in lagu hayo nooleyaal laga qabtay suxuuta duusha nus qarni ka hor.
Laura McAndres oo ah afhayeenka ciidamada cirka Maraykanka ayaa dadka uga digtay in ay usoo dhowaadaan xeradaas.
Ciidamada sirdoonka Maraykanka ee FBI ayaa waraystay Mr Matty, wuxuuna u sheegay in uusan qorsheyneynin in uu halis galiyo amniga xerada.
Meeshan Area 51 loo yaqaano waxa ay muddo sannooyin badan ahayd meel ay booqdaan dadka aaminsan jiritaanka nooleyaasha ka yimid meerayaasha kale.
Maxay tahay meeshan?
Waxay dad badan rumeysanyihiin in dowladda Maraykanka ay xeradan ku hayso macluumaad ku saabsan Suxuunta Duusha oo la rumeysanyahay in ay kaxeeyaan nooleyaal qalaad oo cirka ka yimid.
Waxaa ka mid ah waxyaabaha ay dadka aaminsanyihiin in qaar ka mid ah noolayaashaas ay dowladda Maraykanka qabatay, kuna hayso xaruntaasi Area 51 ee Navada.
Fikradahan ayaa soo biloowday sannadkii 1989-kii, xilligaas oo nin lagu magacaabo Bob Lazar uu waraysi taleefishin ku sheegay in uu ahaa seeynisyahan ka shaqaynayay xaruntan.
Markale ayuu dhawaan shaashadaha kasoo muuqday ninkan, waxaana jira filim laga sameeyay oo ku jira abaaxadda Netflix, taas oo laga yaabo in ay tahay sababta ay dadka markale u danaynayaan arrimahan.
Lazar ayaa sheegay in uu ka shaqeeyay mashruuca UFO ama Suxuunta Duusha, islamarkaasna uu akhriyay qoraalo dowladeed oo sir ah oo ka hadlaya noolayaal qalaad oo ka yimid meerayaasha sare.
Ma uuusans bandhigin caddeymo muuqda, mana la hayo diiwaan la xiriira aqoonta cilmi seeyniska-fiisikiska uu sheeganayo.
Thomas Bullar oo qorey buug lagu magacaabo The Myth and Mystery of UFOs ayaa sheegay in waxan dadka ay rumeysanyihiin ay ugu wacantahay kalsooni darada ay dadka ku qabaan dowladda kadib dagaalkii Vietnam, sidaasi darteedna ay durba rumeysanayaan waxa ay dadka kale sheegaan.
Goobaha kale ee ay dadka rumeysanyihiin in dowladda sir ku qarinayso waxaa ka mid ah Roswell oo ku taala gobolka New Mexico, halkaas oo sheey cirka ka yimid uu ku dhacay sannadkii 1947-dii.
Dadka waxa ay aamineen in waxaasi ahaayeen Suxuurta Duusha, balse dowladda Maraykanka ayaa sannadihii 1990-naadkii shaacisay in waxaasi ahaayeen buufin weyn oo tijaabada hubka niyuukleerka loo isticmaalayay. Sidaas oo ay tahay dadka weli ma rumeysanayaan hadalka dowladda Maraykanka.
Weerarkii warshadaha Shidaalka Sucuudiga : ‘Xog sirdoon oo Iiran la xidhiidhisay weerarka’